12 × 33 Podcast: Izay antenaintsika avy amin'ny WWDC 2021 | Avy amin'ny mac aho
Omaly talata 1 jolay no andro nofidian'ny ekipa manao ny #podcastApple mivantana. Betsaka aminareo no nanatevin-daharana anay tamin'ny alina iray izay nanomboka nanan-kery ny tahan'ny herinaratra nampiady hevitra, noho izany dia natombokay tamin'ny hatsikana vitsivitsy ny momba ilay lohahevitra ...
Fa ny fialana amin'ny olan'ny herinaratra, ny tanjontsika dia ny hifantoka amin'ny vaovao sy ny antsipirian'ny Apple Keynote manaraka, izay hatao amin'ny 7 Jona. Amin'ity hetsika ity dia antenaina fa hisy endri-javatra vaovao manan-danja hanampy ao amin'ny iPadOS ambonin'izany rehetra izany ary koa amin'ny sisa amin'ny rafitra fiasa. Ary ny iPad dia nampiditra ireo processeur M1 tao amin'ny kinova farany ary niteraka fikorontanana lehibe teo amin'ireo mpampiasa Apple izany, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny fahitanao azy ho anao sy mankafizanao podcast omaly.
Ity no rohy hidiranao fantsona YouTube anay ary afaka manaraka anay amin'ny fizarana manaraka mivantana ianao na afaka mankafy ny podcast navoaka tao iTunes for henoy izany amin'ny fotoana sy ny toerana tianao. Raha manana fanontaniana na tolo-kevitra ianao ary mieritreritra ianao fa afaka manome hevitra momba izany amin'ny podcast dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny chat azo amin'ny YouTube, amin'ny alàlan'ny tenifototra #podcastapple ao amin'ny Twitter na avy amin'ny fantsona Telegram anay Marihina fa maimaim-poana ho an'ny rehetra izany ary mihamaro hatrany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Podcast 12 × 33: Izay antenaintsika amin'ny WWDC 2021